Xildhibaan Xaabsade oo ku eedeeyay Wasiirada dawladda Federaalka qaarkood abaabul dagaal ee ku wajahan gobolka Bay
Buluugleey, May 1, 2005
Xildhibaan Maxameed Ibraahim Xaabsade ayaa shalay shir jaraa’id ku qabtay Baydhabo isagoo ku eedeeyay in dowladda Itoobiya iyo kooxo ka tirsan RRA ay ka wadaan abaabul dagaal deegaanka Ceel-Barde iyagoo ujeedadoodu tahay si ay soo weeraraan gobolka Bay.
Wuxuu Xildhibaan Xaabsaday si gaar ah u tilamaamay in kuwa hurinaya colaaddaas uu ka mid yahay Cabdalla Deerow Isaaq oo ah wasiirka Dastuurka, Shiikh Max’ed Nuur (Shiikh Aadan Madoobe) oo ah wasiirka garsoorka waxayna dhamaantooda ka tirsanyihiin ururka RRA.
Wafdigaas uu hogaaminayao Cadalla Deerow tageen magaalada Ceel-Barde oo ay kulan kula yeesheen saraakiil ka tirsan ciidamada Itoobiya. Ujeedada ugu weyn ay u tageen waxay aheed si dowladda Itoobiya kaga helaan hub iyo saanad.
Shir jaraa'idkaan wuxuu ku soo beegmay xilli ay dadweynaha ku nool Gobolka Bay ay ka rajeynayeyn nabad iyo xasillooni, laakiin weli waxaa aloosan colaad ay salka ku hayso faragelinta Itopiya.